Indlu yamaplanga enamagumbi aliqela - iNordic cool style - I-Airbnb
Indlu yamaplanga enamagumbi aliqela - iNordic cool style
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKjersti
I-wifi ekhawulezayo ye-64 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Wamkelekile e-Ustaoset! Siye sayithiya indlu yethu yamaplanga i-Indaba - okuthetha "indawo yokudibana" - ibe yiloo nto kanye indlu yethu yamaplanga: Indawo yokudibana phakathi kwabantu, iinkcubeko, indalo, iintaba, ubugcisa, ubugcisa, isiko kunye nezinto zale mihla.
Indlu yethu yamaplanga ibizwa ngokuba yi- "Řl-hytte", eyakhiwe ngendlela yakudala, eyilwe kwiminyaka engaphezu kweyi-50 eyadlulayo - kodwa namhlanje ibonakala ngathi yeyanamhlanje ngendlela eqhelekileyo ye-Scandi. Ayiphelelanga apho, ayiveli - kodwa ubugcisa obuqinileyo, eyakhiwe ngeenkulungwane zamasiko. Sisebenza kwaye sihlala ixesha elithile eAfrika, sihamba kakhulu, kwaye umphakathi wendlu yethu yamaplanga ubonisa ukudibana kweenkcubeko nabantu. Sibaleka kaninzi kangangoko sinako kwi-Indaba yethu, kwaye siyathemba ukuba nawe uza kuyonwabela le ndawo yokudibana njengathi.
Indlu yamaplanga ikwidolophana eqhelekileyo yaseNorway, ebizwa ngokuba yiHovdestølen, okuthetha ukuba kuza kubakho ezinye izindlu zamaplanga, yiloo nto kwakhona kunokwenzeka ukuba namanzi aphumayo, umbane kunye neintanethi ezinzileyo.
I-wifi ekhawulezayo – i-64 Mbps
4.99 · Izimvo eziyi-82
Ukuqala kwindlu yamaplanga uza kuba nezinto ezahlukahlukeneyo ezikhoyo phandle - ebusika ukutyibilika ekhephini kunye ne-king, ehlotyeni, ukunyuka intaba, ukuloba, ukuhamba ngebhayisekile... Zininzi izinto onokuzenza ezikufutshane onokuzonwabela - nceda ujonge esi sikhokelo. Njengoko kuchaziwe ngasentla, indlu yethu yamaplanga yinxalenye "yedolophana yamaplanga", okuthetha ukuba kukho ezinye izindlu zamaplanga kufutshane, ezinye zazo ziye zahlala apha iminyaka engaphezu kweyi-50, kwaye ezinye zintsha. Abantu balapha banobubele ibe bakhululekile, ibe banobomi obuthuleyo obuqhelekileyo bezi "iilali zamaplanga".
Umbuki zindwendwe ngu- Kjersti
Nangona kusenokwenzeka ukuba asizukudibana nawe ngokobuqu ngexesha lokuhlala kwakho, siza kuhlala sifumaneka ngefowuni okanye nge-imeyile.